इराकी कुर्दिसले दिए तेल स्रोत बुझाउन समय सिमा - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | २९ आश्विन २०७४, आईतवार ०२:५३ |
एजेन्सी । उत्तरी इराकका कुर्दिसहरुले किर्कुक शहरस्थित आफ्ना सैन्य अखडा तथा तेल स्रोत बुझाउन समय सिमा दिइएको बताएका छन्।
कुर्दिसहरुले किर्कुक शहरस्थित आफ्ना सैन्य अखडा तथा तेल स्रोत बुझाउनका लागि स्थानीय समयअनुसार आइतबार मध्यरातको २ बजेसम्मको समय सीमा दिएका छन् । कुर्दिर्सहरुले गत महिना स्वतन्त्रता सम्बन्धि जनमत संग्रह गरेपछि तनाव चुलिएको छ ।
स्वतन्त्रताको पक्षमा परिणाम आएको जनमत संग्रह अवैधानिक भन्दै बग्दादले भत्र्सना गरेको छ । कुर्दिसहरुलाई किर्कुक क्षेत्रमा कुनै खालको समर्थन छैन । इजरायलबाहेक युरोपेली संघ, राष्ट्रसंघ, अमेरिका, बेलायत तथा छिमेकीहरु जनमत संग्रहको विपक्षमा थिए ।
तेलमा धनी किर्कुक प्रान्तमाथि कुर्दिसहरु र बग्दाद दुवैले आँखा लगाएका छन् । इस्लामिक स्टेट (आईएस) विरुद्ध संयुक्त रुपमा लडेका थिए । दुवै पक्ष अहिले भने दुई विरोधी कित्तामा उभिएका छन् । आइएस उत्तरी इराकभर फैलँदा र सेना असफल भएको अवस्थामा समेत सन् २०१४ मा कुर्दिश पेशमेर्गाहरुले यो प्रान्तको अधिकांश हिस्सा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
Previousभेट होला, नहोला भन्दै छुट्टिए सांसद
Nextकहाँ हराए पशुपतिका ३५० रोपनी जग्गा ?
मेस्सीविनाको खेलमा अर्जेन्टिना नाइजेरियासँग पराजित
२९ कार्तिक २०७४, बुधबार ००:२३
बजारमा हल्ला कसरी चल्यो ?
२३ जेष्ठ २०७२, शनिबार ००:४९